Fil d'actualités du 21/04/2018
21/04/2018 - 10:00 : KIANJAN'NY 13 MEY: Tafiditra ny depiote Rossy. Mitohy ny lakrimozenina.
21/04/2018 - 09:45 : ANALAKELY: Mirohotra miditra Analakely ny olona miaraka amin'ny sainam-pirenena sy miredona ny hira Mitsangana ry tanora. Mirefotra ny baomba mandatsa-dranomaso
21/04/2018 - 09:20 : ANDOHAN'ANALAKELY: Manomboka ny fifamaliana madinidinika eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy vahoaka miha tonga maro.
21/04/2018 - 09:00 : ANALAKELY: Voadidina mpitandro filamina ny tanana manomboka eo anoloan'ny La Gastronomie Pizza sy ny eny anoloan'ny Gara Soarano.
20/04/2018 - 15:00 : ANALAKELY: Efa kamio feno EMMOREG miisa 5 no miantrana eo anoloan'ny Gara Soarano amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny famoriam-bahoaka rahampîtso.
20/04/2018 - 12:00 : POLITIKA: Ny lalàm-pifidianana tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny maro no mitarika ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary ny hetsika hotontosain'ny depiote mpanohitra ny asabotsy izao, hoy Mahamoudou Ndriandahy, filohan'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena PFNOSCM/VOIFIRAISANAY.
20/04/2018 - 11:30 : MANDRAKA (RN2) - LOZAM-PIFAMOIVOIZANA MAHATSIRAVINA: Kamio lehibe iray no nilatsaka tanaty hantsana ary nitontona tamina fiara taksibrosy iray teny ambany ny maraina teo, ka olona iray no maty.
20/04/2018 - 11:00 : FAMORIAM-BAHOAKA: Nanamafy ny solombavambahoaka TIM sy MAPAR ny maraina teo fa tsy hihemotra amin'ny hetsika eny anoloan'ny Lapan'ny Tanàna Analakely rahampitso.
20/04/2018 - 10:30 : HERINANDRON'NY VOLA: Hankalazaina ny 23 hatramin'ny 27 aprily 2018 herinandro maneran-tany ho an'ny vola na ny "Global money week".
20/04/2018 - 10:00 : TETIANDROM-PAMPIANARANA: Ny 19 novambra 2018 ary hifarana ny 30 aogositra 2019 ny taom-pianarana 2018-2019. Ny 3 septambra 2019 no hanaovana ny fanadinana CEPE, ary ny 23 hatramin'ny 26 septambra ny BEPC amin'io taom-pianarana ho avy io, araka ny tetiandro navoakan'ny Minisiteran'ny fanabeazam-pirenena.
Archive du 20161123
Ambasadaoron�i Maraoka Voaroaka fa nanodikodim-bola
Nosoloina ny ambasadaoron�i Maraoka eto Madagasikara, Mohammed Amar.
Hery Rajaonarimampianina Anarany fotsiny no filoha �
Matahotra mafy ny ho takona i Hery Rajaonarimampianina mandritra ny fivoriana an-tampon�ny Frankofonia.
Tabera Randriamanantsoa Fatiantoka ny frankofonia
Fatiantoka ho an�ny firenena izao fanatanterahana ny fihaonamben�ny frankofonia eto amintsika izao, hoy ny mpanao politika, Tabera Randriamanantsoa.
Depiote TIM - Rasoanoromalala Horace Mikarakara ny tanoran�Ambohimanarina
Nikarakara fifaninanana ny ADA (Association des Arbitre Ambohimanarina) izay mpikambana ao amin�ny � Firaisankina Ambohimanarina � niaraka tamin�ny depiote Rasoanoromalala Horace mpikambana TIM sady filoham-boninahitry ny fikambanana rahateo.
Taratasin�i Jean Mahatsikaiky ahy ianareo
Miarahaba ry Jean a ! Tapa-tsinay aho raha tafaresaka tamin�ny mpiara-miasa aminareo omaly maraina. Hay ve ka ireo rindrina ety an-tokotany ihany no lokoina amin�izao fandalovan�ny vahiny manan-kaja izao e !
Fitantanana ny Omda Tsy hita noanoa ny fatiantoka
Tontosa soa aman-tsara omaly tetsy amin�ny foibeny etsy Faravohitra ny famerenana amin�ny toerany ny talen�ny ofisy malagasin�ny zon�ny mpamorona (OMDA), Haja Ranjarivo.
Hetsika mandritra ny frankofonia Raikitra ny an�ny mpanao gazety�
Efa ho enim-bolana izao ny olan�ny mpano gazety sy ny mpitondra manoloana ny amboletra nataon�ny fanjakana ka nampandaniana ny lal�na mifehy ny serasera tamin�ny fomba tsy dia ara-dal�na loatra.
"Antananarivo tsiahy sary" Aranty eo amin�ny zaridainan'Andohalo
Frankofonia - CCI Ivato Lesoka ny fikirakiram-baovao
BNI MADAGASCAR Hanolo-tanana ny mpandraharaha
Mitohy hatrany ny ezaky ny banky BNI Madagascar. Hanolo-tanana ireo mpandraharaha tsy ankanavaka eto amintsika indray izy ireo mba hiarovana ireto farany tsy ho matiantoka
FARITRA ANALAMANGA Manampy amin�ny fitandroana ny fandriampahalemana eto an-drenivohitra
Mifanome tanana hitandroana ny fandriampahalemana eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny Faritra Analamanga sy ny prefektiora ary ny polisim-pirenena.
Voafonja tsy ampy taona Kamboty ny 70%
Araka ny tatitra azo teo anivona sampandraharaha iray misahana ny fanarenana ireo zaza nania ho ao anaty fiarahamonina indray dia kamboty avokoa ny 70%-n�ireo zatovo tsy ampy taona 115 voafonja ao Antanimora.
Fivorian'ny Frankofonia Hitondra fanovana ho an�ny firenena Malagasy, hoy ny FFT
Taorian�ny fananganana ny vovonana �Firaisankina ho Fampandrosoana ny Tanindrazana� na ny FFT
Kolejy Teolojika Ivato Mihazakazaka ny asa fanorenana
Efa miroso tanteraka ny asa eny amin�ny kolejy teolojika Ivato amin�ny fanitarana ny fotodrafitrasa ho vavolombelon�ny faha-50 taona nijoroan�ny Fjkm.
Samia maka lesona e !
Na inona na inona tsy fitovian-kevitra sy tsy fitoviam-pijery manoloana ny frankofonia, dia tokony hisy foana ny lesona tsoahina avy amin�izany mba tsy ho lany andro amin�ny adihevitra tsy mitondra mankaiza eto isika.